R/wasaare Gaas oo ka qaybgalaya shirka sanadlaha ah ee Qaramada Midoobey. – Radio Daljir
R/wasaare Gaas oo ka qaybgalaya shirka sanadlaha ah ee Qaramada Midoobey.
Muqdisho, Sept 12 – Ra?iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka KMG ah ee Soomaaliya Mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali iyo wefdi uu hogaaminayo ayaa galabta ka dhoofay garoonka Aadan-cadde International ee magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda magaalada Newyork ee dalka Mareykanka halkaasoo uu uga qeybgali doono September 23.2011 shirka Guud ee sanadlaha Q/midoobay.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa ka hor inta uusan ka qeybgelin shirka guud waxa uu ka qeybgali doonaa kulanka Golaha Ammaanka ee Q/midoobay oo la filayo inuu dhoco September 14 magaalada Newyork, waxaana ajendaha shirkaasi ugu weyn arrinta Soomaaliya iyadoo ay si wadajir ah u guddoomin doonaan Xoghayaha guud ee Q/midoobay Ban-ki moon iyo Ra?iisul Wasaare Dr. Cabdiweli Maxamed Cali.
Sidoo kale, Ra?iisul Wasaaraha iyo wefdigiisa ayaa la filayaa inay ka qeyb galaan shirar kale oo diirada lagu saari doono arrinta Soomaaliya, sida shirka la filayo inuu dhoco September 15, kaasoo lagu casuumay dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya, waxaana diirada lagu saari doonaa arrimaha horumarinta siyaasada iyo mida Bani?aadanimo iyo weliba sidii kor loogu qaadil ahaa gargaarka Soomaaliya.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa la filayaa in September 16 inuu kulan muhiim ah la qaato saraakiil ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka (State Department), wuxuuna kala hadli doonaa sidii dowladda Mareykanku ay kaalin mug leh uga qaadan laheyd horumarinta siyaasada, Bani?aadanimada iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntiina Ra?iisul Wasaaraha ayaa khudbo dhinacyo badan taabaneysa ka jeedin doona kulanka loo dhan yahay ee Q/midoobay kaasoo qabsoomi doona September 23.2011, wuxuuna diirada ku saari doonaa arrimaha Ammaanka, Gargaarka, Siyaasada, iyo hirgelinta Qorshaha xilliga kala guurka ah ee la filayo in lagu dhaqangeliyo ka hor August 2012.